... Io no nandrotsaka be indrindra
Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.
Masindahy Norbert de Xanten (Kintan'ny finoana) 06/06/2020 06:30
... Io no nandrotsaka be indrindra (Tenin'ny Tompo) 06/06/2020 04:00
Masindahy Boniface de Mayence (Kintan'ny finoana) 05/06/2020 06:30
... i Kristy dia zanak'i Davida (Tenin'ny Tompo) 05/06/2020 04:00
Masimbavy Clotilde (Kintan'ny finoana) 04/06/2020 06:30
Izany no didy voalohany... (Tenin'ny Tompo) 04/06/2020 04:00
Masindahy Charles Lwanga (Kintan'ny finoana) 03/06/2020 06:30
Andriamanitry ny velona Izy... (Tenin'ny Tompo) 03/06/2020 04:00
Masimbavy Blandine sy Masindahy Pothin de Lyon (Kintan'ny finoana) 02/06/2020 06:30
Omeo an'i Sezara izay an'i Sezara (Tenin'ny Tompo) 02/06/2020 04:00
Fanambin’ny kihon-dalana ara-kolotsaina
2020-06-04 / 15:24:49 - Nitombo 49 ny tranga vaovao voatilin'ny Institut Pasteur de Madagascar na ny IPM sy ny CICM tamin'ny alarobia 3 jona. Mitontaly 957 izany ankehitriny ny isan'ireo olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina nanomboka ny 19 marsa no mankaty. Nahita tranga miisa 33 ny IPM ka ny avy amin'ny fitiliana natao teto Antananarivo ny 25 amin'ireo ary tamin'ilay laboratoire mobile any Toamasina ny 8. Tany Toamasina avokoa ny 28 tamin'ireo tranga hitan'ny IPM ireo, teto Antananarivo ny 4 ary tany Manjakandriana ny 1. Tranga vaovao miisa 16 no hita tamin'ny fitiliana miisa 115 nataon'ny CICM. Mitontaly 12.608 hatramin'izao ny isan'ny fitiliana vita nanomboka ny 19 marsa hatramin'ny alarobia 3 jona.
2020-06-04 / 14:58:58 - Niampy 1 ny matin'ny covid-19 raha ny tatitra ofisialy voaray androany alakamisy ataondro. Vehivavy bevohoka notsaboina teny amin'ny hôpitaly Anosiavaratra izy io. Miisa 7 izany ankehitriny ireo namoy ny ainy vokatry ny valanaretina entin'ny coronavirus eto Madagasikara. Mijanona ho 9 ireo marary ao anatin'ny "forme grave" ka ao amin'ny hôpitaly Befelatanana ny 2 amin'ireo ary any amin'ny hôpitaly Morafeno Toamasina ny 7. miisa 5 kosa ireo sitrana ka mitontaly 200 izany hatramin'izao.
2020-06-04 / 14:23:55 - Manahy ny hidiran'ny firenena ao anatin'ny krizy lalina ara-tsosialy sy politika ary toekarena ny Komitin'ny Fahamarinana sy Fandriampahalemana ary Fiadanana na ny K3F. Miaina anaty fahantrana lalina ny Malagasy, hoy izy, ary mihamahazo vahana sy mamono olona ny covid-19 sy ny tazomoka ary ny tazomahery dengue. Manampy trotraka ny firongatry ny fahaverezan'asa sy ny tsy fandriampahalemana. Lesoka lehibe, hoy ny K3F ny fahalemen'ny rafi-pitantanan'ny Fanjakana izay mitovy tranga tamin'ny fitondrana nifandimby ihany. Tsy mifampatoky ny vahoaka sy ny mpitondra ary mibaribary ny fisian'ny hantsana lalina manasaraka ny manan-katao sy ny sahirana.
2020-06-02 / 16:51:19 - Nitombo 19 indray ny isan'ireo olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus androany 2 jona. Hita tamin'ny fitiliana nataon'ny Institue Pasteur de Madagascar ny 16 tamin'ireo ary tao amin'ny HJRA ny 6. Nitombo 11 kosa ireo sitrana. Mitontaly 845 ny isan'ireo voatily ho mitondra ny tsimokaretina tato anatin'ny 2 volana sy tapany eo izao ka ny 185 amin'ireo no efa sitrana. Mbola manohy ny fitsaboana any amin'ireo hôpitaly samihafa kosa ny 646. Niampy iray ny marary ahitana ny "forme grave" ka miisa 9 izany izy ireo ankehitriny. Mijanona ho 6 kosa ireo namoy ny ainy. Mitontaly 11.954 ny isan'ny fitiliana rehetra vita nanimboka ny 19 marsa hatramin'ny 31 mai teo.
2020-06-02 / 14:27:55 - Notoloran'ny orinasa Ravinala Airports taratasimbola misy sorabola 4 689 430 ariary ny toerana fitaizana zaza kamboty sy tsy misy mpiahy "Felana Maitso" eny Ambohibao. Vola voahangona avy amin'ny fiaraha-mientan'ny Ravinala Airports sy Novotel ary ny AviaDev Run izy io. Tanjon'izy 3 ireo ny hanangonana vola 1000 livres sterlings (4 689 430 ar), araka ny sosonkevitry ny talen'ny AviaDevn, John HOWELL, na dia tsy tanteraka aza ilay hetsika ara-toekarena eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka AVIADEV Africa tokony ho notanterahina tamin'iny volana mai lasa teo. Ankoatra io taratasimbola io dia nanolotra vary 17 gony milanja 50 kilao isanisany ho an'ny akany "Felana Maitso" koa ny Ravinala Airports ho fanampiana io toeram-pitaizana io amin'izao fiatrehana ny fihibohana izao.
2020-06-02 / 14:04:57- Notanterahina androany talata 2 jona, teny amin'ny lapan'ny antenimieran-doholona eny Anosikely ny fihaonana eo amin'ireo loholona sy ny mpikambana ao amin'ny governemanta tarihin'ny praiminisitra Ntsay Christian. Fihaonana izay nametrahan'ireo senatera ny fanontaniana sy nitondran'izy ireo fanamarihana ho an'ireo avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Mitarika ny loholona amin'izany ny filohany Rivo Rakotovao. Isan'ny nivoitra tamin'ireo fandraisam-pitenenan'ny loholona nifandimby ny fanamarihana momba ny tsy fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fanamboaran-dalana sy lafin-javatra maro mahakasika ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny.